» Xil. Xuseen “Ma joogsan doono khilaafka M/weynaha iyo R/wasaarahav
Xil. Xuseen “Ma joogsan doono khilaafka M/weynaha iyo R/wasaarahav
Feb 17, 2017 - Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah Baarlamaanka Federaalka ayaa ka hadlay arrimo ku aadan khilaafka soo kala dhexgala Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, taasi oo noqotay mid iska caadi ah.
Waxa uu sheegay in uusan joogsan doonin khilaafka soo kala dhexgala Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha ilaa laga helo Ra’iisul wasaare la socda halka uu dalka marayo, fahamsanna bulshada Soomaaliyeed danahooda.
Sidoo kale waxa uu sheegay Doorashadii 2012-kii in ay ka wanaagsan tahay midan, maadaama soo xulista xildhibaanada ay ka qeyb qaateen dad fara badan, sidoo kalena shacabka ay si weyn u soo dhaweeyeen Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in ay nasiib daro tahay in uu qabiil ku yimaado Ra’iisul wasaaraha, loona baahneyn arrintaasi, si dadka iyo dalka ay u helaan Dowlad aanay Madaxdooda is khilaafin.
Inta badan Madaxdii dalka soo martay ayaa waxa ay ahaayeen kuwo khilaaf uu soo kala dhexgalo Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha, taas oo marka dambe qasabta in R/wasaaraha uu talada ka dego.